‘एक रात पूर्वेली रानीसंग’ - नागरिक आवाज
२०७६ पुस २६
बिहानको साढे छ बजेको थियो बरगाछी चोकमा पुग्दा । उभिएको थियो एउटा बस हाम्रै पखाईमा । सबैजना ख¥याकखुरुक जम्मा भइहाल्यौं एकै छिनमा । अलि ढिलो गर्नु भो राजेन्द्र गुरागाइँले । उहाँलाई ढिलो गराउनु भएछ कवि मार्तण्डदम्पत्तिले । उहाँहरु आइपुगेपछि स्टार्ट भयो बस, लाग्यौं उत्तरतिर । निर्मला कोइराला र लक्ष्मी पोखरेलले हात हल्लाएर गर्नु भो बिदाई ।
हाम्रो यो टोली भेला भएको हो विराटनगरमा । सन्दर्भ हो नेपाल भारत साहित्य सङ्गोष्ठी । दुई हजार छहत्तर साल जेष्ठ महिनाको मध्यतिर । आयोजक हो जगन्नाथ गुरागाई प्रतिष्ठान र संयोजक हुनुहुन्छ राजेन्द्र गुरागाई । विराटनगर महानगरपालिकाको सभागृहमा भएको थियो एउटा भव्य कार्यक्रम । मेयरले गरेका थिए उद्घाटन । त्यही कार्यक्रमको रिमरिमे सम्झना ओइलिन नपाउँदै हामी हान्निएका हौं धनकुटातर्फ ।
प्रचण्ड गर्मीको मौसम । बिहानको बेला । भर्खर आँखा मिचेर निद्राबाट ब्युझिने चेष्टा गर्दैछ बिराटनगरले । सडक फराकिलो बनाउने कार्य चलिरहेकोले सडक वरपर ढुङ्गा गिट्टी छरपष्ट छन् । वायुमण्डल धुलाम्य भएको छ । धुलो मिसिएको भए पनि बिहानको चिसोचिसो हावा बडो प्रितीकर लागिरहेको छ गर्मी याममा ।
‘धुलो, धुँवा, धन्दा र धान्धली मिसिएको छ काठमाडौंको हावामा’ भन्नु हुन्थ्यो ज्ञानुवाकर पौडेलले । यहाँ भने धुलोमात्रै मिसिएको रहेछ विराटनगरको हावामा’ निस्कियो मेरो मुखबाट ।‘हैन अलअलि धन पनि मिसिएको छ’ थप्नु भो राजेन्द्र गुरागाईले । गलल्ल हाँस्यौं सबै जना । नेपाली नबुझेर होला भारतीय कविहरु अलमल्ल परे । हिन्दीमा अनुवाद गरेपछि मज्जाले हाँस्नु भो सुशिल शैली र थपे अरुले पनि उन्मुक्त हाँसो ।
मार्तण्डज्यूकी पत्नि मधुम्यामले राजेन्द्र गुरागाइँको ससुराली घरमा पस्ने रहर गर्नु भयो । देर हो जाएगा भनेर हामीले नरोकिउँ भनेर कर गरे पनि नारी हठको अगाडि कसैको केही लागेन । उहाँहरु केही बेर अलमलिनु भो त्यहाँ । ‘कितने प्यारे लोग हैं’ राजेन्द्र गुरागाइँका ससुराली घरका मान्छेलाई भेटेर फर्कदा मधुम्यामको मुखबाट निकै पटक पोखियो यो वाक्य । निकै सन्तुष्ट देखिनु भो उहाँ । बास्तबमा त्यो स्नेह एउटा परिवारिप्रति मात्र प्रकट भएको नभएर हामी सबै नेपालीप्रति प्रकट भएका स्नेहसिक्त शब्द ठानें मैले ।
तीनपैनी चोकमा उभिनु भएको थियो विवश पोखरेल । हाँस्दै चढ्नु भो बसमा । ‘अब हट्ने भो विवशता, फैलिने भो खुशी’ मैले जिस्क्याइहालेँ ।
सडक वरपर उभिएका विराटनगरका कलकारखाना र ठूलठूला भवनहरु आँखामा ठोक्किन थाले । विराटनगरलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक नगरको परिचय दिनको निम्ति प्रयाप्त देखिएका छन् सडक वरपरका औद्योगिक संरचनाहरु । ऊ त्यो नगेन्द्रप्रसाद रिजालको मिल, ऊ त्यो विराटगेट, ऊ त्यो हुलासको कारखाना, ऊ त्यो टेलिभिजन बनाउने कारखाना, ऊ त्यो फलानो बैंक, सुधादिज्यु चोर औंला सोझ्याएर बससंगै दुगुरिइरहेका संरचनाहरु चिनाउँदै हुनुहुन्छ । म आँखाले सकीनसकी टिप्ने प्रयत्न गर्दे छु ।
टंकीसिनुबारीनिर मोरङ जिल्ला पार गरि सुनसरी जिल्लामा प्रवेश गरेको थाहै पाइएन । दुहबी र खनारका बजार क्षेत्र पार गरेर इटहरि पुग्यौं । राधा भट्टराई थपिनु भो त्यहाँ । उता बसको गति बढ्न लाग्यो, यता गफ र हाँसोको गति पनि बढ्न थाल्यो बसभित्र । इटहरी काटेर उँभोउँभो लागेपछि प्रकृतिमात्रै होइन सामाजिक वातावरण पनि केही फरकफरक देखिन थाल्यो । केही किलोमिटरको छोटो दुरीमैं प्रकृति र मानव संस्कृतिको यस्तो भिन्नता संसारमा सायदै अन्यत्र भेटिएला । चुरे भाबर भनिने जङ्गलमा प्रवेश गरेपछि मन पनि शीलत भएर आयो । उहिले चारकोशे झाडी भनिने यो जङ्गल चार कोश चाक्लो थियो रे । आजभोलि मुस्किलले पाँच किलोमिटर भन्दा बढी चाक्लो देखिएन । रुख पनि देखिए निकै पातलापातला ।
नाङ्गो जङ्गलभित्र थुप्रै चिहान देख्यौं । जङ्गल काटेर धरान प्रवेश नगरुन्जेल सडक वरपर सिमेन्टबाट बनेका अनगीन्ती चिहानहरु देखिए । यी चिहानहरु रुखभन्दा पनि धेरै छन् कि जस्तो लागिरह्यो । चीनमा समाधि र चिहानहरुले थुप्रै जग्गालाई खेर फालेको हुँदा मान्छे मरेपछि जलाउने चलन शुरु गरेको छ रे । पुराना चिहानहरुलाई पनि उधिनेर बस्ती बसाउँदै छ रे । बाँचेका मान्छेलाई भन्दा मरेका मान्छेको चिहानका लागि धेरै जमिन छुट्टयाउनु परेपछि यो धर्ती कति साँगुरो हुने होला भविष्यमा ? पारदर्शी जंगलभित्रका चिहानले गरेको जंगल अतिक्रमणलाई हेर्दै बाटो काट्दा कहाली लागेर आयो ।
जङगल छिचोल्ने बित्तिकै धरानको छाता चोक आइहाल्यो । छाताचोकको चहलपहल धरानको सानो छनक दिदै थियो । नेपालको सबैभन्दा फेशनेबल शहर मानिन्छ धरानलाई । बस रोकेर हामी लाग्यौं गीता मन्दिरतर्फ । मन्दिरको प्राङ्गणमा हात जोडेर उभिनु भएको छ प्रा.डा. गोपाल भण्डारी । स्वागतार्थ शरणकुमार राई पनि उभिनु भएको देखेँ । अरुअरु धेरै अनुहारको मुस्कान पनि पोखियो हाम्रो स्वागतमा । मन्दिरको तर्फबाट सबै आगन्तुकलाई रुद्राक्षको माला लगाएर सम्मान गरियो । उपहार स्वरुप दिइयो एउटाएउटा गीताको पुस्तक पनि । साहित्यको रङमा मिसियो आस्थाको रङ्ग । बन्यो इन्द्रेणी भन्दा पनि सुन्दर बिम्ब । खुवाइयो पुरी, तरकारी र खीरको सात्विक भोजन । एकछिन गरियो सङ्क्षिप्त कार्यक्रम पनि । केही मन्तव्य दिइए, केही कविता पनि पाठ भए । फेरि बिदा लियौं र लाग्यौं उत्तरतर्फ ।
यहाँ हाम्रो टोलीमा थपिनु भयो प्रा.डा. गोपाल भण्डारी पनि ।
धरानको बजारमा अलमलिनु थिएन हामीलाई । सिधै उक्लिन थाल्यौं चुरे पहाड । धरानको प्रसिद्ध बुढासुब्बा मन्दिर, विजयपुर किल्ला र दन्तकाली मन्दिर पूर्वपट्टि छुटे । सडक वरपर र बसको झ्यालबाट देखिने परपरका दृश्यहरुमा धरानको सौन्दर्य छताछुल्ल पोखिन थाल्यो । टिप्न थाले हाम्रा आँखाले ती दृश्यलाई । बस घ्यारघ्यार गर्दै उकालो लागिरह्यो । पूर्वतिर सेउतिखोला र पश्चिमपट्टि सर्दु खोलाले च्याप्दैच्याप्दै ल्याएको धरान लमतन्न सुतेको छ एउटा साँगुरो फाँटमाथि । बढ्दै गएको शहरीकरणबाट निसास्सिएर उकुसमुकुस भइरहेजस्तो लाग्यो धरान । साराङ्गाडाँडाको घुमाउरो उकालो काटेर शिखरबास पुगेपछि भने हुलंगो भएर आयो मन । ड्राइभरको देब्रेपट्टिको सिटमा बसेको छु म । मेरो छेउमा हुनुहुन्छ भारतको भिवानीबाट आउनु भएको मृदुभाषी कवि अशोक भाटी र उहाँमा शालीन पत्नि । चुरे पहाडका हरिया पाखामा घुम्दैफिर्दै उँभोउँभो लागि रहेको छ नागबेली सडक । परपरका दृश्यहरु पनि पस्किरहेका छन् हरियो मुस्कान नै ।
‘ऊ कोशी !’ चिच्याउनु भयो डा. भण्डारी । एउटा कुइनेटो छिचोल्दै गर्दा झल्यास्स दृश्यपान भयो कोशी नदीको । कौशिकी र कौशितकी नामले परापूर्वकालदेखि चिनिदै आएको यो नदीको ठूलो महत्व छ धार्मिक प्रसङ्गमा । कोशीले भत्काएका, डुबाएका, बिथोलेका, चिथोरेका बगरहरु अस्ती काठमाडौंदेखि प्लेनबाट विराटनगर आउँदा देखिएका थिए । सात ओटा नदीहरु मिसिएर पहाडबाट तराई झरेपछि सप्तकोशी अनेकौं भँगालाहरुमा बाँडिएर सुनसरी र सप्तरी जिल्लाका समतल फाँटहरुलाई क्षतविक्षत पार्दै भारतको विहारमा प्रवेश गर्छ । यहाँ निरबाट देखिएको कोशी भने निकै लजालु र निकै साँगुरिएको देखियो । पश्चिमपट्टिका पहाडका कुनै खोंच र कन्दराभित्र अधेका (बाहिर नदेखिने) महारानीजस्तै बनेर संकोच मान्दै बगिरहेको होला ।
जारी नै छन् सुधा पौडेल दिज्यूका धार्मिक, आध्यात्मिक प्रसङ्गका गफ । उहाँका रोचक गफपट्टि कान लगाउँ कि यतातिरको हरितिमा सौन्दर्यपट्टि आँखा लगाउँ? अलमलमा छु म । यो त्यो हो, त्यो यो हो भनेर यतातिरको बेलीबिस्तार लगाउँदै हुनुहन्छ डा.भण्डारी पनि । हामी उहाँको हाते संकेततर्फ दृष्टि सोझ्याउन पुग्छौं र जे देख्यो त्यही हेरेर रोमाञ्चित बनिहाल्छौं । उहाँ धरानको स्थानिय भएकोले पनि हाम्रालागि आधिकारिक नै बन्न पुग्छन् उहाँद्वारा सम्प्रेषित हरेक जानकारी ।
निकै रमाउनु भएको छ अशोक भाटीका दम्पति । जे देख्यो त्यहीं नै पोखिन्छ उहाँहरुको कुतुहलता । सकुन्जेल र जानेसम्म, थाह पाएसम्म उहाँहरुको कुतुहलताको निरुपण गर्ने चेष्टा गरिरहेको छु म पनि । उसो त म आफै पनि कुतुहलता र जिज्ञासाको शीतले भिज्नुसम्म भिजेको छु निथु्रक्कै । जे भन्छु म, रुचि लिएर सुनिरहनु हुन्छ उहाँहरु ।
‘अरे आप को तो बहुत जानकारी है?’ अशोकजी बेलाबेला भनिरहनु हुन्छ, मानौं मैले कुनै अलौकिक तत्वको आविष्कार गरेर त्यसैको विवेचना गरिरहेको छु । फिस्स हाँस्छु म र भन्छु— ‘अपना देश है, थोडा थोडा जानकारी तो अपने आप हो ही जाता है’ ।
धरानबाट उकालो चढेको डेडघण्टामा ढलीमली गर्दै हामी भेडेटार पुग्यौं । हुन त धरानबाट भेडेटारको दुरी बीस किलोमिटर मात्रै हो तर ठाउँठाउँमा ओर्लदै हेर्दै फोटो खिच्दै बीस किलोमिटर छिचोल्न हामीलाई डेड घण्टा लागिहाल्यो । एउटा फराकिलो थुम्कोमाथि थपक्क बसेको भेडेटार खासै ठूलो बजार त होइन । गाउँ नै भन्दा पनि हुन्छ यसलाई । पातलो बस्ती छरिएको छ पहाडी थुम्काहरुमाथि । सडकको छेउछाउमा देखिए केही होटल, रेस्टोरेन्ट, लज । सबै मदिराजन्य पदार्थले झकिझकाऊ छन् । तरकारी र पहाडी कृषि उत्पादनका पसल पनि देखिए थुप्रै । वरिपरिका ससाना थुम्का सेता राता घरहरुले शोभायमान छन् । चोकैमा पूर्वी नेपालका एकजना नामी व्यक्तित्व इमानसिंह चेमजोङको सालिक ठडिएको छ । चोकबाट पूर्वतिर लागेपछि अलिपर एउटा पार्कमा विशाल शंखको आकृति देखियो । यो एउटै ढुङ्गालाई खोपेर बनाइएको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो शंख हो रे । सेतो रङ्गको शंख पारिलो घाममा टलक्क टल्किएको छ । अनि टल्किएको छ भेडेटार पनि त्यसैको चमकमा । शंखपार्कमा बसेर एकछिन सुस्तायौं र नियाल्न थाल्यौं भेडेटार वरपरको प्राकृतिक छटालाई ।
खुला आकाश, चहकिलो घामको झुल्को, बादलका सेता बुट्टा, हरियालीले भरिएका पहाडी पाखा, थुम्काका विविध आकृतिहरु, दक्षिणतिर परपरसम्म फैलिएको मैदान र घाँटी ठाडो पारेर हेर्दा परपर उत्तरतिर देखिने श्वेत हिमचुचुराहरु । के रहेनछ र भेडेटारसंग? मोबाइलमा गुगल सर्च गरेर हेरँे । समुद्र सतहबाट एकहजार चार सय बीस मिटर उँचाईमा रहेछ यो ठाउँ । यति उँचाईमा बसेर संयुक्त रुपमा पस्किरहेको छ उँचो हिमालदेखि समतल तराइँका विविध बान्कीहरु ।
भेडेटारको अर्को गन्तव्य हो चाल्र्सपिक । पश्चिमपट्टिको एउटा अग्लो थुम्को । बेलायतका युवराज चाल्र्स कुनै समय यहाँ आइपुगेका थिए रे । त्यसपछि यो थुम्कोको नामै रह्यो चाल्र्सपिक । वरपरका पहाडी लहरहरु र दक्षिणतिरको मैदान यहाँबाट छर्लङ्गै देखिने हुँदा यो थुम्कोले भेडेटारको प्रचारप्रसारमा निकै सघाउ पु¥याएको छ । भेडेटार प्रेमिप्रेमिकाको यात्रा गर्ने आकर्षक गन्तव्य पनि बनेको रहेछ आजभोलि ।
निकै बेर हरायौं हामी भेडेटारमा । कोही कता, कोही कता छरिए । निर्बन्ध भयो मन । निर्बन्ध भए पाइला । प्रकृतिको सुरम्य वातावरणमा हराउँदा मनको थकान पनि मेटिएजस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ । चिसो हावा, चिसो पानी, चिसै मौसम बेस्सरी रुच्यो खाना पनि । भोक मीठो कि? भोजन मीठो? निक्र्योल गर्न सकिएन तर खुवाई भने हाम्रो मीठै भएको मान्नु पर्छ यहाँ ।
राजेन्द्र गुरागाईलाई हम्मेहम्मे नै प¥यो मान्छेहरु बटुलेर हिंडाउन । एउटा भेटिए अर्र्को हराउने, अर्को भेटिए अर्को हराउने । भ्यागुत्ताको धार्नी पु¥याउन सकिन्न भन्ने उखान हामीमाथि चरितार्थ भएको छ यतिखेर ।
‘छिटो जाउँ धनकुटामा धेरै कार्यक्रम भ्याउनु छ’ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ । सुनेनन् कसैले । मन र आँखा रमाइरह्यो भने कान पनि कदाचित् मौन भैहाल्दो रहेछ कि क्या हो ! भेडेटारको मुसुक्क मुस्कुराइरहेको उज्यालो परिवेशलाई छोडेर हिड्न कसैको मनले मानेकै छैन ।
बसले हर्न लगाएर तारन्तार ताकेता गरेपछि अन्ततः हिड्नै प¥यो । भेडेटार छोडेको एकैछिनमा कार्कीछाप भन्ने ठाउँ आयो । कार्की थर भएका कुनै मानिसले कुनै राम्रो काम गरेर छाप छोडेको हुनाले यो नाम रहेको होला — मैले अनुमान गरेँ । डा.गोपाल भण्डारीले सहमतिमा टाउको हल्लाउनु भयो ।
अगाडि चारखाले गोलाई भन्ने पहराको फन्को मारेर तल झ¥यौं । सर्प बटारिएजस्तै चारपटक घुमेको छ यहाँनिर सडक । छेवैमा देखियो नमस्ते झरना । टिनीनी मोबाइलमा रमेशचन्द्र अधिकारीको फोन आयो । ‘भर्खर चारखाले गोलाईको फन्को मारेर नमस्ते गर्न लागेका छौं’ राजेन्द्र गुरागाईले उत्तर फर्काउनु भयो रमाइलो पाराले । ‘म्याग्दीको रुप्से झरना हेरिसकेकाहरुले त यो झरना नहेरे पनि हुन्छ हौ’ हतारमिश्रीत ताकेता आयो उताबाट ।
‘धेरै नपर्खाऔं है अब उहाँलाई’ गुरागाइँसरले पनि हतारमाथि हतार थपेपछि नमस्ते झरनालाई गरियो टाढैबाट नमस्ते । घुम्दैफिर्दै, ओरालो झर्दै सिमसुआ, फलामेटार, घण्टे र फेदी पनि बाटोमा आए, गए । गरजुआ काटेपछि अलिकति फराकिलो बगर र सानो खोला भेटियो । लेउतेखोला रहेछ नाम । खोलाको छेवैछेउ बाटो तेरपायाँतेरपायाँ हान्नियो । पानी थोरै भएपनि लेउतेखोलाले आफू वरपरको बगरलाई रसिलो बनाएको छ । किनारैकिनार निकैबेर कुदेपछि पल्लोछेउको लाबरबोटे पुग्यौं । अगाडि आयो उखुडाँडा । उखुको एउटै बोट नभएको यो ठाउँको नाम कसरी उखुडाँडा रह्यो होला? जिज्ञासा पोखें मैले फेरि डा.भण्डारीछेऊ । उहाँसंग पनि उत्तर रहेनछ । आआफ्ना अनुमान पोखे सबैले । मुलघाट भन्ने ठाउँमा तम्मर नदीको पुल नतर्दासम्म पनि निष्कर्श निस्किन सकेन । तम्मर पुगेपछि फेरि तम्मरको नामकरण बन्यो हाम्रो अनुमान र चर्चाको विषय । मैले पुस्तकहरुमा तमोर भनेर पढेको थिएँ । यहाँ कतै तमर त कतै तम्मर लेखिएको पाइयो । जे होस् मान्छेको मनको तम (कालो) पखाल्ने स्नेहसरिता बनेर बगिरहेको छ यो नदी युगौंदेखि । तमसंग नै कुनै प्रत्यय जोडेर यसको नामकरण भएको हुनुपर्छ । भनिरह्यो मेरो मनले । मन्दिर देखियो छेउमा । ‘विश्रान्ती मन्दिर हो’ सुधादिज्यूले चिनाउनु भो । ढोग्यौं टाढैबाट ।
‘ओहो भाइ तपाइँ पनि!’ एकाएक सुधादिज्यूले मेरो पिठ्यूमा धाप मारेर अँगालो हाल्नु भो । म झस्किएँ । मेरो मोबाइलको होमस्क्रिनमा स्वामी अवधेशानन्द गिरिज्यूको तस्वीर देखेपछि उहाँलाई आश्चर्य लागेको रहेछ । निकै बेर उहाँले अँगालो हालीरहनु भो मलाई । म पनि एउटा बालक आमाको काखमा खुम्चिएझैं खुम्चिरहेँ । हरिद्वारस्थित भारतमाता मन्दिरकी उहाँ साधिका हुनुहुँदो रहेछ । स्वामी सत्यमित्रानन्द गिरिज्यूकी उहाँ चेली । स्वामी सत्यमित्रानन्दका प्रिय शिष्य र उत्तराधिकारी स्वामी अवधेशानन्द गिरिज्यूलाई मैले पनि गुरु मानेको छु । आफू एकलव्यजस्तै बनेर मनमनै श्रद्धा पोखिरहन्छु । कुरा गर्दै जाँदा दिज्यूलाई मैले गुरुफुपु र उहाँले मलाई भदाशिष्य भन्नु पर्ने नाता पो जोडियो । भेडेटारदेखि वल्लोेपल्लो आसनमा बसेर यात्रा गर्ने अवसर जुर्नमा पनि केही संयोग त अवश्य नै छ । हरिद्वार गएर स्वामीज्यूको दर्शन गराउने वचन दिनु भएको छ दिज्यूले मलाई । उहाँका आध्यात्मिक प्रसङ्ग र डा. भण्डारीका ऐतिहासिक चर्चा सुन्दै सडक वरपरका नयाँनयाँ दृश्यहरु हेर्दै जानु पनि आफैमा एउटा निबन्धको पटाक्षेप भन्दा कम भएन ।
बिस्तारै माथिमाथि चढ्न थाल्यो सडक । रुद्रबारी, गुठीटार, पातलेखोला र बाख्रेखोला पार गरेर ठाडो उकालो लाग्दै गर्दै माथिपट्टिको पहाडी पाखोमा छरिएको धनकुटा बजारका छिरिमिरि दृश्यहरु आँखामा काउकुती लगाउन थाले । गोठगाउँ र आँटमाराको उकालो काटेपछि त आइहाल्यो धनकुटा ।
धरानदेखि धनकुटासम्म बाउन्न किलोमिटर तन्किएको यो बाटो बेलायतले बनाइदिएको हो रे । अन्यत्रका पहाडी बाटोहरु भन्दा अलि राम्रै लाग्यो यो । पहिरोले भत्काएको कतै देखिएन । बाटोमा भीर, पहरा, पुलपुलेसाहरु पनि कमै देखिए ।। ‘धनकुटाको लागि सूर्यबहादुर थापाको देन हो यो’ सधैं सम्झिदा रहेछन् धनकुटेहरु ।
ओलियौं बसपार्कमा । लाग्यौं लश्करै सिढी चढ्दै बजारतिर । बीच चोकमा भेटियो अन्जुली होटेल । ढोकैमा उभिनु भएको छ रमेशचन्द्र अधिकारी । बिजुली चम्किएजस्तै उज्यालो मुस्कान छर्नु भो हाम्रासामू । उहाँको स्वागतको आद्र्रताले भिज्न थाल्यौं हामी । ‘आम्मामामा पर्खिदापर्खिदा ज्यानै जालाजस्तो भो त हौ’ पर्खाईको झिंजो पोखिहाल्नु भो उहाँले । नेपाली भाषाको पूर्वीया लबज, त्यसैमा उहाँको मृदु मुस्कान । अँध्यारोमा टर्च बालेजस्तै चम्किरह्यो उहाँको हाँसो । ‘धन्न यति छिटो ल्याइपु¥याएको छु यो घुमन्ते टोलीलाई’ राजेन्द्र गुरागाईबाट आयो स्पष्टिकरण ।
‘लुलुलु अब भित्र पसम्’ मुकुन्द प्रयास नाम गरेका एकजना हँसिला युवा लाग्नु भो हाम्रा झोला ओसार्न । आजको हाम्रो आश्रयस्थल हो यो होटेल । एउटा कार्यक्रममा सहभागि हुनु छ, मन फुकाएर धनकुटा घुम्नु छ र आजको रात यही बिताउनु छ । अब केको हतार !
‘पहिले हिले जाउँ र एउटो कार्यक्रम भ्याइहालौं’ केही बेर थकान मेटौं भनेर सोच्दै थिएँ, हिंडाउन हतार गर्न थालीहाल्नु भो रमेशजी ।
बजारको साँगुरो बाटो हिड्यौं एकछिन । तल्लो कोप्चे र माथिल्लो कोप्चेमा विभक्त रहेछ बजार । माथिल्लो कोप्चेको बीचैमा भेट्यौं एउटा सुन्दर मन्दिर । नाम रहेछ निशान भगवति मन्दिर । परिवेश सुन्दर, शान्त र सफा । मन्दिरको आँगनमा पुगेपछि स्वतः बन्द भैहाले आँखा । मन र मस्तिष्क आफै नतमस्तक भैहाल्छ मन्दिरमा पुग्दा । ‘धनकुटाको पुरानो इतिहासको साक्षी हो यो मन्दिर’ ढाकाटोपी लगाएर पुजारीले इतिहास कोट्टयाउन लागे ।
बजारबाट अलिकति पल्तिर ढल्केपछि सल्लाको वन आयो । वनैवन लाग्यौं उकालो चढ्दै हिलेतर्फ । उ त्यो रेडियो नेपाल, ऊ त्यो सिडियो कार्यालय, ऊ त्यो टँुडिखेल, ऊ त्यो राजाको शिविर राख्ने ठाउँ, ऊ त्यो फलानो, त्यो ढिस्कानो, यादबनाथ तिमिल्सिनाले सम्हाले गाइडको जिम्मेवारी । लोकसेवा भन्ने ठाउँमा पुगेपछि रमेशचन्द्र अधिकारीले आफ्नो घर देखाउनु भो । लोकसेवा आयोगको कार्यालय यहाँ रहेकोले यहाँको नामै लोकसेवा रहेको रहेछ । त्यहाँबाट बाटो उँभोउँभो लाग्यो । एैंसेलु, लालीगुरास, उत्तीसका रुखहरु उभिएका छन् बाटो वरपर । बिहान मुलघाटको आसपासमा गर्मी ठाउँमा पाइने आँप, नरिवल, सुपारीका बोटहरु प्रशस्त देखिएका थिए । अहिले हिलेको पाखामा चिसो हावापानी हुने ठाउँमा पाइने लालीगुरास, एैंसेलुजस्ता बोटबिरुवा हेर्न पाइए । दशबारह किलोमिटरको दुरीमैं प्राकृतिक सम्पदाहरुको यस्तो पृथक उपस्थिति संसारमा अन्यत्र कहाँ पाइएला र? यस्तो विविधताको थलो हो हाम्रो नेपाल ।
धनकुटाबाट तेरह किलोमिटर कुदेपछि पुग्यौं हिले । धुम्म बादलले ढाकिएका छन् पाखोपखेरा । एउटा रमाइलो पहाडको काखमा थुपुक्क लुकेको हिलेको बजारी क्षेत्र निकै साँगुरो र अटेसमटेस लाग्यो । परपरका खुला पाखाहरु भने बादलले ढाकिएका भए पनि खुला छन् । बजारको बीचैमा तुम्बाको आकृति राखिएको छ । कोदोबाट बनेको एकखालको मदिराजन्य पेय पदार्थ पिउने भाँडोलाई भनिंदोरहेछ तुम्बा । अलि अगाडि सानो तर कलात्मक बौद्ध गुम्बा पनि भेटियो । भगवान बुद्धका पाउमा आस्थाका श्रद्धासुमन नचढाएर कसरी अगाडि बढ्नु?
दक्षिणतर्फ फर्किएको पाखो भए पनि यहाँको वातावरण ओसिलो लाग्यो । बादलका टुक्राहरु क्षणभरमैं हराउँछन् र क्षण भरमैं आकाशलाई टमक्क ढाकिदिन्छन् । हुस्सुले ढाकिरहने भएकोले यहाँ पारिलो घाम लाग्न पाउँदैन । त्यहि भएर वैसाखमा पनि हरिया नै छन् पाखापखेराहरु । वातावरण यति चिसो छ कि वैसाखमै घाम ताप्नु पर्ने ।
जताजतै पानी रसाएको देखिन्छ हिलेका पाखाभरी । ‘इतना पानी हरियाणा मे होता तो हम क्या क्या करते!’ यहाँको खेर गईरहेको पानीलाई देखेर उदेक मान्नु हुन्छ अशोक भाटी ।‘नेपाल विश्वको दोश्रो ठूलो पानीको भण्डार भएको देश हो । यस्ता ससाना कुलो र मूलहरुमा बग्ने पानीको यहाँ के गीन्ती’ मेरो उत्तरले फिस्स हाँसे उनी । भारतको रोहतक जिल्लाका पेयजल अधिकारीको रुपमा कार्यरत अशोक भाटीलाई यहाँको खेर गैरहेको पानी देखेर निकै उदेक लागेको स्पष्ट झल्किरहेको छ । मेरो पनि मनभित्र खेर गैरहेको नेपाली पानीले उदेक नलागेको त कहाँ हो र?
कुनै समय यहाँ पुगेर चिसो पानीले मुख धोएकी माला सिन्हाले भनेको एउटा दृष्टान्त सुनाएँ उनलाई । मैले एउटा पत्रिकामा कतै पढेको थिएँ— हिलेको चिसो पानीले मुख धोएपछि माला सिन्हालाई आफ्नो मुहार मेकअप गरेको भन्दा पनि सुन्दर र कोमल लागेको थियो रे । म अब यहीं घर बनाएर बस्छु, यही पानीले मुख धुन्छु र आधुनिक मेकअपलाई त्यागीदन्छु भनेकी थिइन् उनले । यो दृष्टान्त सुनेपछि अशोक भाटीकी श्रीमतीले पनि कुलोमा बगिरहेको पानीले मुख धोइहालिन् ।
शम्भुजीत बास्कोटाको ‘कलकल खोला साइँलीजी झरझर झरना, रातदिन साइलीजी तिम्रै सम्झना’ भन्ने गीत बज्यो पल्तिरको चिया पसलमा । यो गीतले हिलेकै सौन्दर्य सोपान पोखिरहेजस्तो लाग्यो । ‘कितना सुन्दर गाना है’ मैले हिन्दीमा उल्था गरेपछि मुन्टो हल्लाउँदै प्र्रशंसा गर्न लागे सुशील शैली । हिलेमा चलिरहेको चिसोचिसो बतास र यस गीतका सांगीतिक तरङ्गसंगसंगै उडिरह्यो मन । रमेश पौडेल दुगुर्दै आउनु भो हामीलाई भेट्न । प्रसिद्ध उद्घोषक र कवि रमेशले कोरेका कैयौं रेखाचित्रहरुले धेरैका साहित्यक कृतिको शोभा बढाएका छन् । हाल उहाँ रेडियो नेपालको क्षेत्रीय प्रबन्धक भएर धनकुटा पुग्नु भएको रहेछ । उहाँसंगै गफ गर्दै पुग्यौं एउटा थुम्कोको टुप्पोमा । अग्लो थुम्कोमा होराइजन नामको ठूलो होटल देखियो । होटलको प्राङ्गणबाट उत्तरतिर हिमाली चुचुराहरु छर्लङ्गै देखिए । कति लामो हो हिमाली श्रृङ्खला? कति गन्नु उत्तुङ्ग हिमशिखरहरु?
हिलेको प्राकृतिक छटालाई आँखाले टिपूँ कि क्यामेरामा कैद गरुँ म अलमलमा छु । जता हे¥यो उतै पङ्क्तिबद्ध पहाडमात्रै देखिन्छन् । पहाडैपहाडका अनगीन्ती लहरहरु क्षितिजसम्मै टमक्कै भरिएका छन् । बडो कुतुकमय छ पहाडी भूगोलको यो कला । आँखाले हेर्न नभ्याउने ठाउँमा पनि पहाडका आकृति पुगेका छन् । सयपत्री फूलका पत्रहरु एकआपसमा जोडिए जसरी जोडिएर उभिएका पहाडका भिन्नभिन्न आकृतिमा प्रकृतिको विहंगम कला छरिएको छ । आँखा झिमझिम गर्दै एकोहोरो हेरिरहे भारतबाट आएका कविहरुले । ‘आप लोगों को तो ये नजारा सामान्य लगता होगा, हमारे लिए तो ये दिलकश हंै, भूतो न भविष्यति है’ सुशिल शैलीले पोखिरहे मनको प्रफुल्लता । मोटो शरिर भएकी बबली वशिष्ठ र मधु शर्मालाई भने उकालो ओरालो गर्न सकस नै प¥यो तर अंचल पुतलीजस्तै उनीहरुका आँखा भने नाचिरहे हिलेका पाखाभरी ।
सबैभन्दा बढी रमाए अशोक भाटीदम्पत्ति । ‘हमारे लिए तो हनिमुन जैसा हो रहा है’ । मनको खुसी यसरी पोखिरहिन् उनकी पत्निले । छोरा एमबिबिएसमा पढिरहेको भए पनि उनीहरु भरखर बिहे गरेर हनिमुनमा आएको जोडीजस्तै देखिएका छन् देखिन पनि । मनको खुसीले अनुहारलाई उज्यालो पार्ने र अनुहार उज्यालो भएपछि उमेर पनि घटेजस्तो हुन्छ कि क्या हो !मन लागुन्जेल पहाडका दृश्य हेरिरहने रहर नमेटिदै ओभानै आँखा लिएर झर्नु परिहाल्यो हिलेको बजार । होटेल व्यवसायी समितिले गरेको कार्यक्रममा सहभागि हुनु छ यहाँ । हिले पुगेर जसरी प्रकृतिको अनुपम सौन्दर्यको रसपान गर्न पाइयो कार्यक्रममा पुगेर झन् न्यानो आत्मियताको आस्वादन पनि गर्ने अवसर जु¥यो । होटेल व्यवसायी समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र बस्नेतले खादा लगाईदिएर स्वागत गर्नु भयो भने तुम्बाको नमुना चिनो दिएर बिदाई गर्नु भयो । कहिल्यै मदिरा नपिउनेहरुले पनि स्थानिक प्रचलनको मान राख्दै हाँसेर ग्रहण गरे तुम्बा ।
केही भाषण भए, केही कविता पढिए, केही तस्वीर खिचिए । कार्यक्रम सम्पन्न गरेर हिलेबाट फेरि धनकुटै फकियौं । उही बाटो, उही बस, उनै यात्रु । अनि पुगियो उही होटेल । साँझपख एउटा सुरुचिपूर्ण कार्यक्रम शुरु भयो होटलको माथिल्लो तलाको प्रेक्षालयमा । धनकुटाका थुप्रै अनुहारहरु भेला भएका छन् कार्यक्रममा । आयोजक सल्लेरी साहित्य सङ्गम रहेछ । नेपाल भारत मैत्री साहित्य गोष्ठी नाम दिइएको छ कार्यक्रमको । कतिपय परिचितजस्ता लाग्ने आँखा, कतिपय अपरिचितजस्ता देखिने अनुहार छन् । आँखैआँखाले साट्यौं अभिवादन । उज्यालो अनुहार र तेजिला आँखा भएकी अनुजा पराजुलीले सम्हालिन् मञ्च । एकातिर उनको मादक सौन्दर्य, अर्कोतिर उनको श्रुतिमधुर उद्घोषणकला । बीचैमा बिनायोको स्वर सुनेर लट्ठिएको सर्पझैं हल्लीरहेका छौं हामीहरु । दुबै कुराको समिश्रणद्वारा उनले बिछट्टै गरी लोभ्याइन् हामीलाई । मन्चमा विराजमान छन् कलकत्ताका सुदर्शन कवि मार्तण्ड, आर्कषक व्यक्तित्वकी धनी गंगा सुवेदी र विराटनगरका हँसिला कवि विवश पोखरेल । विराटनगरकी कवियत्रि गीता निरौलाको पंचचामर छन्दको कविताले पनि भित्रैसम्म पुगेर काउकुति लगायो । विवश पोखरेलका मुक्तक र सुशील शैलीका सायरीले पनि निकै ताली पाए ।
हरियाणाबाट आएका योगेश समदर्शीको स्वर निकै रातसम्म गुञ्जिइरह्यो । उनले माइक छोड्न मन गरेकै थिएनन् तर समय नेटो काट्न लागिसकेको थियो । केही औपचारिकता र केही अनौपचारिकताका चरण पुरा गरेर अन्ततः मध्यरातमा समापन भयो कार्यक्रम ।
खाना खाएर सुत्न जाँदा निकै ढिलो भैसकेको थियो । आँखाभरी निंद आएर लोलाउन थाले पनि मनको सप्तकोशी भने हजार जिज्ञासा बोकेर उर्लिरह्यो एकोहोरो । रातभर तमोरको छालजस्तै एकोहोरो छचल्किरह्यो जिज्ञासाको पोखरी पनि ।
भोलिपल्ट बिहानैदेखि कुतकुतिन थाल्यो मन । हृदय छरपस्ट भएर पोखिन थाल्यो धनकुटाका सल्लेरी पाखाहरुमा । भिरालोभिरालो परेको डाँडामाथि थपक्क बसेको छ धनकुटा । चुुच्चो परेको पहाडको माथिमाथि साँगुरो बाटो लमतन्न सुतेको छ । त्यही बाटोलाई घेरेर वरिपरि घुचुमुच्च ठडिएका छन् घरका ताँती । अलि माथिपट्टिको अग्लो थुम्कोमाथि छरिएका छन् सरकारी कार्यालय भएका भवनहरु । वरपरका थुम्काभरि पनि देखिए घरैघर । जहाँजहाँ सजिलो ठाउँ भेटियो त्यहीं घर बनाइहाल्ने होडबाजी चलेजस्तो । घर बनाउन नमिल्ने ठाउँमा मात्रै सल्लाका रुख उभिएका छन् । सलक्क परेका सल्लेरी वनले भरिएका छन् परपरका पाखापखेराहरु । परपरका अग्ला डाँडाकाँडा र कराला, भिराला, चट्टाने पाखाहरुले बलियो गरि पहरा दिइरहेका छन् धनकुटालाई । ती चट्टाने पहाडहरुलाई नाघेर कसरी आइपुग्दो हो यहाँसम्म वतास? कसरी आउँदो हो घामको झुल्को? अग्ला हिम चुचुरालाई छोएर आउने चिसोचिसो वताससंग आँखा जुधाएर मस्किरहेझैं लाग्यो यहाँको परिवेश । भिन्नभिन्न पहाडी आकृतिहरुले बनाएको बहुरङ्गी सौन्दर्यले शोभायमान छ वातावरण । उसै पनि बैसाखे मौसम आफैमा कामुक हुन्छ नै ।
प्रकृतिले सबै कुरा मिलाएर राखेको भए पनि आधुनिक विकास भने यहाँ पनि अव्यवस्थित देखियो । जे मन लाग्यो त्यही, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ सिमेण्टका संरचना उभ्याइहाल्ने रोग यहाँ पनि पुगेको रहेछ । टाढाबाट हेर्दा वन, पाखा, पखेरा र डाँडा थुम्काहरु जति राम्रा देखिए सिमेण्टले बनेका संरचनाहरु भने कूरुप देखिन्छन् ।
सुन्तला धेरै पाइन्छ रे धनकुटामा । त्यही भएर यसलाई सुन्तलाको राजधानी पनि भनिंदो रहेछ । सुन्तलालाई लामो समयसम्म भण्डारण गरेर राख्ने व्यवस्था गर्न सकेको भए वैसाखसम्मै चाख्न पाइन्थ्यो होला । हामीले भने सुन्तलाको बोट हेरेरै चित्त बुझायौं । धनकुटा बजारका मूल सडकका घरको अघिल्लो भागमा सुन्तला रङ्ले पोत्ने अभियान चलेको रहेछ । ‘धनकुटालाई सुन्तलाको राजधानी’ भनेर चिनाउने प्रयास हो यो
— पत्रकार संतोषी राई एउटै रङले घर रङ्गीनुको कारण सुनाउँछन् । रमाइलै लाग्यो यो अभियान पनि ।
धनकुटाको प्राकृतिक सौन्दर्यले लोभ्याउने र लोभ्याइने चलन पुरानै हो । प्रधानमन्त्री देवशम्शेर राणा पनि कुनै समय लोभिएर यतै आइपुगेका थिए । काठमाडौंबाट सत्ताच्युत भएर धपाइने बेला कहाँ बस्ने भनेर सोध्दा उनले धनकुटालाई रोजेका थिए रे । पुनः सत्ता हासिल गर्ने षडयन्त्र ग¥यो भनेर यहाँबाट पनि लखेटिएका देव शमशेरको व्याकुल मन यहाँकै जस्तो सौन्दर्य खोज्दै भौंतारिदा—भांैतारिदा अन्ततः भारतको मँसुरी पुगेर अडिएको थियो रे ।
धनकुटाको सौन्दर्यले मोहित हुनेमा राजा वीरेन्द्र पनि हुन् । उनले त पूर्वान्चल विकास क्षेत्रको केन्द्र धनकुटालाई नै बनाएका थिए । पूर्वी नेपालको देशदर्शनमा जाँदा धनकुटामैं उनको शिविर राखिन्थ्यो । राजाको सवारी शिविर महिनौंसम्म यहाँ रहँदा यो ठाउँले पनि राजधानीकै गौरव पाउँथ्यो । नेपालमा संघियताको शुरुआत भएपछि प्रदेश नं. १ को राजधानी सुहाउने उपयुक्त ठाउँ धनकुटानै भए पनि राजनीतिक खिंचातानीले त्यो गौरव हासिल गर्न सकेको छैन यसले ।
एउटा भनाई छ सर्वाङ् सुन्दरी वा रुपसी नारीको नाम राख्नै पर्दैन । उसलाई बोलाउने राम्राराम्रा नामहरु स्वतः प्रस्फुटन भै हाल्छन् । सुन्दरी वा रुपसी नारीले श्रृङ्गार गरिरहनु पनि आवश्यक हुँदैन । किनकि जति छोप्न र जति लुकाउन खोजे पनि त्यो सुन्दरता येनकेनप्रकारेण प्रदर्शित भएरै छोड्छ । धनकुटालाई राजधानी बनाए पनि, नबनाए पनि यसको प्राृकतिक परिचय कसैले लुट्न सक्दैन । कसैले भौतिक विकास गरे पनि, नगरे पनि धनकुटा ‘पूर्वकी रानी’ थियो, छ र रहिरहनेछ । ‘सुन्तलाको राजधानी’ हो र रहीरहने छ ।
दुई हजार छहत्तर साल जेठ सत्र गतेको एकदिन यही सुन्तले राजधानीको परिभ्रमण गरेर कटाउन पाउनु एउटा मीठो आकस्मिकता बन्यो मेरो लागि । पूर्वकी रानीको अँगालोमा एकरातका केही घण्टा बिताउन पाउनु त अहोभाग भैहाल्यो । धनकुटाको दृश्यावलोकनमैं यसरी लिप्त भएँ कि म रमेश पौडेलको आग्रहलाई स्वीकारेर अन्तर्वार्ताको निम्ती रेडियो नेपालको पूर्वान्चल प्रसारण केन्द्रसम्म पुग्न पनि भ्याइनँ । अलिकति ओरालो झरेर कचिडेसम्म पुगि शब्दसाम्राज्ञी झमक घिमिरेको दर्शन गर्न पनि सकिएन । सूर्यबहादुर थापाको गाउँ मुगा र अलि पल्तिरको पार्खिबाससम्म पनि पुग्ने रहर अधुरै रह्यो । पूर्वेली रानीले मेरो मनलाई यसरी बाँधिन् कि म एकोहोरो लट्ठीरहें, लट्ठीरहें ।
तल्लो कोप्चेबाट प्राज्ञ गंगा सुवेदीज्यूको कारमा बसेर ओरालो झर्दै गर्दा हिजो दिनभरीका स्मृति कुसुमहरु मनभित्र पुनः छचल्किन थाले । कुरकुरे बैंस झैं मात्तिएका आँखाहरु कहिले वल्लो पाखोमा ठोक्किइरहे । कहिले पल्लो पाखोमा टाँस्सिइरहे । मनभित्र झल्यास्स केही शब्दहरु फुरे र मोबाइलको
नोट प्याडमा अङ्कित गरिहालेँ :
अलिकति ज्ञानार्जन गराउँछिन् यी धराले
अलिकत प्रेमार्जन गराउँछिन् यी धराले
पखालेर कल्मष र अहमको दुर्भावलाई
अलिकति पूण्यार्जन गराउँछिन् यी धराले
Previous articleनेपाली काग्रेस क्षेत्र नं.१ द्वारा माघ मेलाको शुभकामना व्यक्त
Next articleड्वासर बेलाैरी माघ म्यालाकाे मन्त्री बीना मगर द्वारा उद्घाटन
दिपेन्द्र बस्‍नेत - २०७६ असार ३ 0
जमुना न्युरे सुखड,कैलाली असार ३ अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा होमस्टेको प्रचलन बढ्दो छ । ब्यवस्थित होटल,लज नभएको स्थानमा होम स्टे एउटा राम्रो बिकल्प पनि हो ।...